HK Company to Invest $500 Million in Rakhine, Yangon Power Plants | Myanmar Business Today
Home Investment & Finance HK Company to Invest $500 Million in Rakhine, Yangon Power Plants
Zin Thu Tun/ Myanmar Business Today
Hong Kong-based V-Power is set to invest $500 million in power generation and distribution in Kyauk Phyu Township, Rakhine State and Thaketa Township, Yangon Region.
“Their proposal says they will buildapower plant as soon as possible, but they have yet to provideatime frame,” said U Thant Sin Lwin, Deputy Director General of the Directorate of Investment and Company Administration (DICA).
The proposed projects include the construction ofa$363 million, 400-megawatt power plant by NTIC V Power YG1 Limited anda$140 million, 150-megawatt plant by CNTIC V Power KY3 Limited. Both companies are subsidiaries of V Power Group Holding Limited.
In October, V-Power won the bidding for four of five power production projects intended to solve the problem of summertime blackouts. In addition to the above-mentioned projects in Rakhine State and Yangon Region, the company won contracts fora350-megawatt plant in Thanlyin Township, Yangon anda20-megawatt plant in Kyun Chaung Township, Magway Region.
V-Power has also won the project to builda90-megawatt power plant in Myint Gyan Township.
According to DICA data, Myanmar has received over $1.3 billion in foreign direct investment in the first two months of the 2020 fiscal year.
သာကေတနှင့် ကျောက်ဖြူရှိ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍအတွက် ဟောင်ကောင်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ကန်ဒေါ်လာသန်း(၅၀၀)ကျော်ဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သာကေတမြို့နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ရှိ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် V-Power ကုမ္ပဏီက ကန်ဒေါ်လာသန်း (၅၀၀)ကျော်ဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းကို ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာနမှ သိရသည်။
“ ဒီကိုတင်ပြတာကတော့ လျှပ်စစ်ကိုအမြန်ဆုံးပေးနိုင်အောင်လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီဖော်ပြထားတယ်။ စီမံကိန်းကာလကိုတော့မပြောထားဘူး။ အမြန်ဆုံးလုပ်သွားမယ်ဆိုတာပဲ ပါမယ်” ဟု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးသန့်စင်လွင်က ပြောသည်။
မဂ္ဂါဝပ်(၄၀၀)ရှိ သာကေတဓာတ်အားပေးစက်ရုံအတွက် NTIC V power YG1 Limited ကုမ္ပဏီက ကန်ဒေါ်လာသန်း(၃၆၃)ကျော် နှင့် မဂ္ဂါဝပ်(၁၅၀)ရှိ ကျောက်ဖြူဓာတ်အားပေးစက်ရုံအတွက် CNTIC V power KY3 Limited ကုမ္ပဏီက ကန်ဒေါ်လာသန်း (၁၄၀)ကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး နေရာနှစ်ခုလုံးရှိ စီမံကိန်းများသည် ဟောင်ကောင်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းက ဝင်ရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဟောင်ကောင်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည် နွေရာသီဓါတ်အားမပြတ်တောက်စေရေးအတွက် ဓာတ်အားပေးစီမံကိန်းငါးခုအနက် အထက်ပါ စီမံကိန်းနှစ်ခုအပါအဝင် မဂ္ဂါဝပ်(၃၅၀)ရှိ သန်လျင်ဓါတ်အားပေး စက်ရုံနှင့် မဂ္ဂါဝပ်(၂၀)ရှိကျွန်းချောင်းဓါတ်အားပေးစက်ရုံ တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း ပြီးခဲ့သောအောက်တိုဘာ လ၌ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယင်း တင်ဒါလေးခုအောင်မြင်ထားသော V power ကုမ္ပဏီသည် မြင်းခြံ၌ ငါးနှစ်သက်တမ်းဖြင့် မဂ္ဂါဝပ် (၉၀)ထုတ်လုပ်နိုင်သော သဘာဝဓါတ်ငွေ့သုံးဓါတ်အားပေးစက်ရုံကို လည်ပတ်ခွင့်ရရှိထားသည်။
လက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၁၉-၂၀၂၀) နှစ်လတာအတွင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ရောက်ထားမှုမှာ ကန် ဒေါ်လာ(၁ဒသမ၃)ဘီလီယံကျော်ထိ ဝင်ရောက်ထားကြောင်း DICA ၏ စာရင်းများအရသိရသည်။
Previous articleChin State Invites EOIs for Shopping Mall, Motel
Next articleMyanmar to Appoint5New Economic Minister-Counselors